မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရည်းစားရကံကောင်းတယ်(သို့) ယောင်္ကျားရကံကောင်းတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပါ – Trend.com.mm
Posted on July 22, 2018 July 16, 2018 by Shun Lei Phyo
မိန်းကလေးတိုင်းဟာ ချစ်သူရကံကောင်းယောင်္ကျားရကံကောင်းချင်ကြတာကြီးပါပဲ။ ဒါပင်မဲ့ အတိတ်ဘ၀ကကုသိုလ်ကံရယ် လက်ရှိဘ၀ရဲ့မတူညီတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေရယ်ကြောင့် လူတိုင်းတော့ ကံကောင်းချင်မှကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့မေးကြမယ် အိမ်ထောင်ဖက်ကံကောင်းတယ်ချစ်သူရကံကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုလဲပေါ့၊ဘယ်လိုပုံစံတွေသူ့ချစ်သူသူ့အမျိုးသားက လုပ်ပေးလို့ ၊ဘာတွေဝယ်ပေးလို့ ဘယ်လိုဈေးကြီးတာတွေလက်ဆောင်ပေးလို့လဲပေါ့..မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိမှာပါ။ တကယ်တော့ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ယောင်္ကျားလေးဆိုတာ ဒါမျိုးလေးပါ…
(၃) သင်အောင်မြင်ဖို့ တတ်စွမ်းသမျှကူညီပေးတဲ့ယောင်္ကျား
(၇) သင့်ရဲ့Dark side ကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပေးနိုင်ပြီး လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ယောင်္ကျားမျိုးပါ။
ဒီလိုအချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံတဲ့ယောင်္ကျားတွေစာထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အားလုံး Pefect ဖြစ်တဲ့လူရယ်တော့မရှိနိုင်ပင်မဲ့ဒီအချက်တွေထဲက တော်တော်များများနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာကံကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်လာပါပြီ ။ အိုကေ… ဒီလိုယောင်္ကျားလေးကံကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေ ဘာတွေအကျိုးခံစားရတတ်ကြသလဲမေးအုံးမလား???
ဒါတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်အပေါ်နားလည်သိတတ်တဲ့ယောင်္ကျားလေးတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်ရလို့ဘ၀ကိုအေးအေးလူလူနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့စွာဖြတ်သန်းနေကြရတဲ့မိန်းကလေးမျိုးတွေပါ။ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုဒီလိုပျော်ရွှင်အေးမြတဲ့ဘ၀ကိုပေးနိုင်တဲ့ကိုကိုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခါတန်ဖိုးနားလည်ပြီးလေးလေးစားစားနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေ…
မိနျးကလေးတိုငျးဟာ ခဈြသူရကံကောငျးယောကငြ်ျားရကံကောငျးခငျြကွတာကွီးပါပဲ။ ဒါပငျမဲ့ အတိတျဘဝကကုသိုလျကံရယျ လကျရှိဘဝရဲ့မတူညီတဲ့နထေိုငျမှုပုံစံတှရေယျကွောငျ့ လူတိုငျးတော့ ကံကောငျးခငျြမှကောငျးပါလိမျ့မယျ။ ဆိုတော့မေးကွမယျ အိမျထောငျဖကျကံကောငျးတယျခဈြသူရကံကောငျးတဲ့မိနျးကလေးဆိုတာ ဘယျလိုလဲပေါ့၊ဘယျလိုပုံစံတှသေူ့ခဈြသူသူ့အမြိုးသားက လုပျပေးလို့ ၊ဘာတှဝေယျပေးလို့ ဘယျလိုစြေးကွီးတာတှလေကျဆောငျပေးလို့လဲပေါ့..မေးခှနျးတှအေမြားကွီးရှိမှာပါ။ တကယျတော့ ကိုယျသတျမှတျထားတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျ ကံကောငျးခွငျးတှကေိုပေးနိုငျတဲ့ယောကငြ်ျားလေးဆိုတာ ဒါမြိုးလေးပါ…
(၃) သငျအောငျမွငျဖို့ တတျစှမျးသမြှကူညီပေးတဲ့ယောကငြ်ျား
(၇) သငျ့ရဲ့Dark side ကို ကောငျးကောငျးနားလညျပေးနိုငျပွီး လမျးပွပေးနိုငျတဲ့ယောကငြ်ျားမြိုးပါ။
ဒီလိုအခကျြတှအေားလုံးပွညျ့စုံတဲ့ယောကငြ်ျားတှစောထဲမှာပဲရှိတယျလို့ပွောကွလိမျ့မယျ။ ဟုတျပါတယျ အားလုံး Pefect ဖွဈတဲ့လူရယျတော့မရှိနိုငျပငျမဲ့ဒီအခကျြတှထေဲက တျောတျောမြားမြားနဲ့ကိုကျညီတဲ့ယောကငြ်ျားကောငျးတဈယောကျရှိနပွေီဆိုရငျတော့ သငျဟာကံကောငျးတဲ့မိနျးကလေးဖွဈလာပါပွီ ။ အိုကေ… ဒီလိုယောကငြ်ျားလေးကံကောငျးတဲ့မိနျးကလေးတှေ ဘာတှအေကြိုးခံစားရတတျကွသလဲမေးအုံးမလား???
ဒါတှအေားလုံးဟာ ကိုယျ့အပျေါနားလညျသိတတျတဲ့ယောကငြ်ျားလေးတဈကိုပိုငျဆိုငျထားလိုကျရလို့ဘဝကိုအေးအေးလူလူနဲ့စိတျခမျြးမွစှေ့ာဖွတျသနျးနကွေရတဲ့မိနျးကလေးမြိုးတှပေါ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုဒီလိုပြျောရှငျအေးမွတဲ့ဘဝကိုပေးနိုငျတဲ့ကိုကိုတှကေိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့အခါတနျဖိုးနားလညျပွီးလေးလေးစားစားနဲ့နှဈဦးနှဈဖကျပြျောရှငျစှာ ပေါငျးဖကျနိုငျကွပါစေ…